1080 P – Quality – Yourcinema
The Core မိတ်ဆွေတိုမင်းသားကြီး Bruce Willis ရဲ့ Ammegdon ဇာတ်ကားကို ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ကြပါသလား။ ဒါဆိုရင်ေတာ့ ဒီဇာတ်ကားကို ဒုတိယ Ammegdon လိုပဲ ညႇွန်းေပးပါရေစ။ ဒီဇာတ်ကားကလည်း ကမ္ဘာကြီးကို ကယ်တင်ဖိုအသက်စွန်ပြီး စွန်စားခန်းဖွင်ကြတဲ့ သူရဲေကာင်းတစ်စုအကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားပါပဲ။ ဒါပေမယ် ဒီတစ်ခါ သွားတဲ့နေရာကေတာ့ ကမ္ဘာအပြင်ဖက်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုထဲကိုပါ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ သီအိုရီအရ ကမ္ဘာအလယ်ဗဟိုက အူတိုင်မွာ သံရည်ပူတွေဟာ တစ်စက္ကန်ကို မိုင်ပေါင်းများစွာနဲ့လည်ပတ်နေပါတယ်။ အဲဒီအရည်လည်ပတ်လမ်းမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေဟာ ကမ္ဘာ‌ေတာင်နဲ့ေမြာက်ဝင်ရိုးစွန်းတွေနဲ ဟန်ခၾက်ညီေအာင် ထိန်းသိမ်းေပးထားရင်း နေရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်‌ေပးထားတာပါ။ အဲဒီအၿခိန်မွာေတာ့ အဲဒီလည်ပတ်မႈကြီးရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အတွက် ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးဖို့ အခြေအနေရောက်လာပါပြီ။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ........ ဇာတ်ကားလေးက Rating နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ ၂၀၀၃ ခုနစ်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်တာလည်းပါတယ်.... အခုအချိန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာဖြစ်ပြီး.... သိပ္ပံ နည်းပညာတွေ သူတို့ရဲ့ နည်းစနစ်ကျကျက ...
IMDB: 5.5/10 90,330 votes
Passengers 2016 ကျော်တို့ Hunger Games မင်းသမီး Jennifer Lawrence နဲ့ Star Lord တဖြစ်လဲ Chris Pratt တို့ အဓိကပါဝင်ထားတဲ့ Passengers ရုပ်ရှင်ကို ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာ တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ အာကသယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ နှစ် ၁၀၀ ကျော်အိပ်စက်ပြီး ခရီးနှင်နေကြတဲ့အထဲက ခရီးသည်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jennifer နဲ့ Chris တို့ဟာ ခရီးစဉ်မဆုံးခင် နှစ် ၉၀ လောက်စောပြီး နိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ပြီး hibernate မလုပ်ရင် ခရီးစဉ်မဆုံးခင် သေဖို့ပဲရှိပေမဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေကြောင့် ပြန်အိပ်လို့လည်းမရတဲ့အပြင် ယာဉ်ပျံကြီးကလည်း အန္တရာယ်တွင်းကျရောက်လာလေတော့ တစ်စီးလုံးမှာနိုးနေတာဆိုလို့ နှစ်ယောက်တဲ့ရှိတဲ့ ဇာတ်လိုက်နှစ်ယောက် ယာဉ်ပျံကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ... Director Morten Tyldum ရိုက်ကူးထားတဲ့ အခုရုပ်ရှင်ဟာ December 21 ရက်မှာ ရုံတင်မှာဖြစ်ပြီး Jennifer နဲ့ Chris တို့အပြင် ...
IMDB: 7/10 333,331 votes
Fan 2016 IMDB 7/10 ရထားတဲ့ ရှရွတ်ခန်းမင်းသားရဲ့ နှစ်ကိုယ်ခွဲ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်... တစ်ယောက်ကတော့ စူပါစတား ကြယ်ပွင့်တစ်ဦး Aryan Khanna ဖြစ်ပြီး... နောက်တစ်ယောက်ကစူပါစတားကြယ်ပွင့်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ဦး Gaurav Chanda ဖြစ်တယ်... ပရိတ်သတ်ဖြစ်တဲ့အပြင် Aryanအပေါ် ငယ်စဥ်ထဲက လွန်စွာ ရူးသွပ်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်... Aryanနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်ပြီး သူတို့မြို့လေးရဲ့ (သရုပ်ဆောင်)ပြိုင်ပွဲတိုင်းကို ပထမဆုပဲအမြဲရလေ့ရှိတယ်... တစ်နေ့ Aryanရဲ့မွေးနေ့ကို အရောက်သွားခဲ့ရာမှ သူ့ရဲ့ရူးသွပ်မှုကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့မြင်ရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်... ပရိတ်သတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Gauravက သူရဲ့ရူးသွပ်မှုက အဆုံးစွန်ထိ လုပ်သွားခဲ့တာပါ... စတားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Aryanကလဲ မာနကြီးကြီး တုန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်... သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက အဆုံးသတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ... (အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Pyae Sone Kyaw ဖြစ်ပြီး Admin Kyaw Thet က Encodeလုပ်ပေးထားပါတယ်)
IMDB: 7.0/10 4077 votes
Nannaku Prematho 2016 "ခံစားချက်ဆိုတာ ချက်ချင်းထုတ် ဖော်ပြသရတဲ့အရာလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမဲ့တစ်ချို့ခံစားချက်တွေက​တော့ ဖုံးကွယ်ထားဖ်ို့လ်ိုတာပေါ့ ဒီခံစားချက်တွေကိုဆက်သိမ်းထားမှ ဒီ နာကျည်မှူကြီးက ကျနော်တို့နဲ့တူတူ တစ်သက်လုံးရှိနေမှာလေ " ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှည့်ကွက်တွေထည့်သုံးသွားတဲ့ဒီကားလေးက ကြည့်ရတာ အရမ်းတန်ပါတယ်နော် ....... UKနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ India လူမျိုးတွေထဲမှာ အချမ်းသာဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ရမေချန် ဒရာပါရဆတ် တစ်ယောက် ဂိမ်းတစ်ခုကစားပြီးလှည့်ဖျားတက်တဲ့ ခရစ်ရှနာမာတီရဲ့ လိမ်လည်ခြင်းခံလိုက်ရပြီး လုပ်ငန်းတွေဒေဝါလီ ခံလိုက်ရတဲ့ ရမေချန်ဒရာပါရာဆတ် တစ်ယောက် သား ၃ယောက် အတွက် အရှုံး သမား ဆူပရာမန်နီရမ် အဖြစ် ဘဝကိုခက်ခဲစွာရပ်တည်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးထွက်သက်တွက် ရက် ၃၀အလိုမှာ ရင်ထဲက နာကျည်မှုတွေထုတ်ပြတဲ့ချိန် သား​ငယ်ဆုံးဖြစ်သူ အာဘီရမ် တစ်ယောက် သူ့အ​ဖေရဲ့နောက်ဆုံး ဆန္ဒကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းပေးမလည်း.... ကြားထဲ အာဘီရမ် နဲ့ ခရစ်ရှနာမာတီရဲ့ အချစ်ဆုံးသမီးလေး ဒေဗရာ ရဲ့အချစ်ရေးဘယ်လိုရှိမလည်း...... အာဘီရမ် ကရော ခရစ်ရှနာမာတီရဲ့ ဘီလယံ 35000 ကြွယ်ဝမှုတွေကို ရက် 30နဲ့0...
IMDB: 7.6/10 8,496 votes
Rebel 2012 "ခြင်္သေ့ အိမ်မှာ ခြင်္သေ့ဘဲ မွေးမှာပေါ့ ခြင်္သေ့ နှလုံးသား ခဲနဲ့​ပေါက်မဲ့သူလာရင် ကျောက်တုံးနဲ့ ပြန်ရှင်းပစ်မဲ့သူမျိုး သခင့်သား ရရီး​" စတီဗင်ရောဘတ် .ဝန်ကြီး စေရာဂျ်. ၁၀နှစ်တာ အညိုးတေးတွေနဲ့ ကလဲစားခြေဖို့ ဂျေရော သုံးယောက်ပေါင်းပြီး မင်းသားလေးရရှိီးရဲ့ဇနီးလောင်းဒီပါလီ နဲ့မိဘတွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခဲ့နောက် ပုန်းအောင်းနေတဲ့ စတီဗင်ရောဘတ် ကို မင်းသားလေးကရောရှာတွေ့နိုင်မလား စတီဗင်ရောဘတ်နဲ့ မင်းသမီးနန်သနီးအဖေ နာနူးကရော ဘယ်လ်ိုပတ်သတ်နေလည််း ရရှိီးကရော နန်သနီးကိုချစ်ဟန်ဆောင်ပြီး စတီဗင်ရောဘတ်ဆီဘယ်လိုချဥ်းကပ်မလည်း ဆ​က်လက်ကြည့်ရှူပေးပါဦး အညွန်း HMH
IMDB: 4.7/10 1409 votes
Tomorrowland 2015 Tomorrowland ကားက " မဆိုးပါဘူး။ မိုက်ပါတယ် " ဆိုတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။ အရမ်းအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဇာတ်လမ်းအရဆိုရင် Tomorrowland ဆိုတာ အံ့သြစရာတွေ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့နေရာပါ။ ဒါကို အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Casey နဲ့ပြသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခုတွေ့ရင် အရမ်းသဘောကျပြီး ရယ်တာ၊ လျှေက်ကလိတာ၊ အကုန်လျှောက်စပ်စုတာတွေက ကြည့်နေတဲ့လူကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်။ တကယ်ကိုယ်က သိပ်မအံ့သြရင်တောင် သူက ကလေးလေးလိုပဲ ရယ်မောပြီး မိုက်တယ် ဘာညာ ပြောတော့ လူက ပိုမျောသွားတယ်လေ။ (ရုပ်ရှင်ထဲတော့ အဲလိုဗမာလိုမပြောပါ) ။ ဒါကတော့ ဆွယ်တာတော်တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ မင်းသမီး Acting ကလည်း မဆိုပါဘူး။ သူ့အသံပြဲနဲ့ ထ ထ အော်တာတွေကိုတော့ သဘာကျတယ်။ မင်းသားလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကောင်းတယ် but အရမ်း အကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းသဘောကျတာကတော့ Athena လုပ်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ အသက်က ...
IMDB: 6.4/10 167,204 votes
Mad Max: Fury Road လူသားတွေရဲ့ မကောင်းမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပျက်သုဉ်းသွားရင် ဘာဖြစ်မယ်လို့တွေးဖူးပါလား...အဲ့တာဆိုရင်တော့ Mad Max: Fury Road ကိုကြည့်လိုက်ပါ.... Venom မင်းသားချော Tom Hardy က Max အနေနဲ့ပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးကြီး Charlize Theron လည်းပါဝင်ထားပါတယ်... ကမ္ဘာကြီးချို့ယွင်းပျက်စီးလာပြီး လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စိုးမိုးလာတဲ့ အမျိုးနွယ်တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်... ဒီ Fury Road ထဲမှာဆို လူသားမျိူးနွယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Immortan Joe ရဲ့ လက်ထောက် Furiosa ကိုအသားပေးဖော်ပြထားတာပါ လူသားတွေကိုကျွန်တွေအဖြစ်သဘောထားပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Joe ကို Furiosa နဲ့ Max အပြင်အခြားသောထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်များရဲ့ လက်စားချေမှုကိုအံ့သြစွာကြည့်ရမှာပါ.... ဒီကားဟာ 2015 May လမှာရုံတင်ခဲ့ပြီး တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ action ကားကောင်းတစ်ကားပါ.... Box office ကို $374.4 M ထိရရှိထားပြီး IMDb 8.1 ထိရရှိထားတာပါ...ဒါကြောင့် ဒီလို action ကားကောင်းမျိူးကိုလက်မလွှတ်တမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Aron ဖြစ်ပြီး Kyaw Thet မှ Encode လုပ်ပေးထားပါတယ်။
IMDB: 8.1/10 834,299 votes
Jaya Janaki Nayaka 2017 အုပ်ထိန်းသူအိမ်ရှင်မ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း စည်းလွတ်ဝါးလွတ်နေချင်သလိုနေလာတဲ့ သားအဖသုံးယောက် သူတို့ဘ၀ထဲကို မိန်းမချောလေးရောက်လာပြီး သံယောဇဉ်တွယ်ကာမှ ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ အန္တရာယ်တွေ၊ ဂိုဏ်းသတ်ပွဲတွေကြောင့် သေမင်းကိုလက်ယပ်ခေါ်မိသလိုဖြစ်ကြသောအခါ.... ဇာတ်ကားကြည့်ရန်